CHROME OS NA WINDOWS 8 NA 8.1 NA IHE ỌHỤRỤ NDỊ ỌZỌ NKE CHROME 32 NCHỌGHARỊ - WINDOWS - 2019
Chrome OS na Windows 8 na 8.1 na ihe ọhụrụ ndị ọzọ nke Chrome 32 nchọgharị
Ụbọchị abụọ gara aga, a tọhapụrụ Google Chrome nchọgharị melite, ugbu a, mbipute nke 32 dị mkpa. Na mbipute ọhụrụ ọtụtụ mmepụta ọhụrụ na-emejuputa ozugbo na otu n'ime ihe ndị a na-ahụkarị bụ ụdị Windows 8. Ọhụụ ọhụrụ.
Dịka iwu, ma ọ bụrụ na ị kwụsịghị ọrụ Windows ma wepụ ihe omume site na mmalite, Chrome na-emelite ya na akpaghị aka. Mana, ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ dị mkpa, pịa bọtịnụ ntọala n'elu nri wee họrọ "Ihe Google Chrome nchọgharị".
Ọnọdụ ọhụrụ Windows 8 na Chrome 32 - otu Chrome OS
Ọ bụrụ na ị nwere otu n'ime nsụgharị ọhụrụ nke Windows (8 ma ọ bụ 8.1) arụnyere na kọmputa gị, ma ị na-eji ihe nchọgharị Chrome, ị nwere ike ịme ya na ọnọdụ Windows 8. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ ntọala ma họrọ "Malitegharịa na Chrome na ọnọdụ Windows 8".
Ihe ị na-ahụ mgbe ị na-eji nsụgharị ọhụrụ nke ihe nchọgharị ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọkpụkpụ Chrome OS - interface multi-window, ịkwalite na ịwụnye ngwa Chrome na ọrụ ọrụ, nke a na-akpọ "Shelf" ebe a.
Ya mere, ọ bụrụ na ị na-eche ma ịzụta Chromebook ma ọ bụ na ọ bụghị, ị nwere ike ịchọta otu esi arụ ọrụ na ya site na ịrụ ọrụ na ọnọdụ a. Chrome OS bụ ihe ị na-ahụ na ihuenyo, ma e wezụga maka nkọwa ụfọdụ.
Ntanet ọhụrụ na ihe nchọgharị
Ekwenyesiri m ike na onye ọbụla Chrome ọ bụla, na ihe nchọgharị ndị ọzọ, achọpụtawo na mgbe ị na-achọ Intanet, ụda sitere na ihe ntanetị nchọgharị ụfọdụ, ma ọ gaghị ekwe omume ịmata onye nke a. Na Chrome 32, ya na ọrụ ọ bụla a ma ama, enwere ike ịchọta isi iyi ya site na akara ngosi ahụ; ọ dị ka ọ nwere ike ịhụ ya na onyinyo dị n'okpuru ebe a.
Ikekwe onye si na ndị na-agụ ya, ozi gbasara atụmatụ ndị a ga-aba uru. Ihe ohuru ohuru - njikwa akaụntụ Google Chrome - nlele anya n 'ọrụ na ọrụ ntinye na nleta nleta. Echebeghị m ya.